Ampahefa-dalan’ny CAN: polisy miisa 1 350 hitandro ny filaminana | NewsMada
Manoloana ny fiatrehan’ny ekipam-pirenena malagasy ny taranja baolina kitra Barean’i Madagasikara ny ampahefa-dalan’ny Can 2019, nisy ny fepetra manokana noraisin’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka (MSP) mahakasika ny fitandroana ny filaminana, anio hariva.
Nambaran’ny talen’ny kabinetra eo anivon’ny MSP, ny kaomisera Ainirina Albert Estel fa miisa 1 350 ireo polisy hiandraikitra ny filaminana eto an-drenivohitra ka toy ny tamin’ny ampahavalon-dalana lasa teo dia mbola hisy hatrany ny polisy hijoro eny amin’ireny toerana be olona ireny. Hisy ny «cellule opérationnelle» handamina ny fandrindrana ny filaminana amin’ny ankapobeny. Hisy polisy maromaro handamina ny fifamoivoizana anio alina tontolo mba hisorohana ny fitohanana ary ao indray ireo hisahana manokana ny toerana saro-pady. Nanao antso avo koa ity manamboninahitra ambony eo anivon’ny polisim-pirenena ity mba ho tena hiara-hientana ao anaty hafaliana sy amin’ny fifanajana ny Malagasy iray manontolo eo am-panohanana ny ekipam-pirenena malagasy.
Hosaziana izay mihoa-pefy…
Nanamafy kosa ny tale jeneralin’ny polisim-pirenena, ny contrôleur général de police, Rakotozanany Dany Marius fa hisy ireo polisy mandeha an-tongotra sy mandeha fiara hisahana ny fitandroana ny filaminana rehetra, anio alina. Nambarany fa aoka mba tsy ho tonga any amin’ny fanelingelenana ny fifamoivoizana ny fientanana ao anaty hafaliana. Misy ireo entanim-pifaliana dia mikapokapoka fiaran’olona na manajanona fiaran’olona na koa ny fandrakofana saina ny fiaran’olona kanefa ny fiara mandeha. Eo koa ny fanaovana sakana tampoka eny an-dalana. Noho izany, hitombo ny isan’ireo polisy hisahana ny filaminana ary ny fandikan-dalàna (fihoaram-pefy) dia tsy maintsy handraisana fepetra amin’ny alalan’ny fanasaziana. “Tsy maintsy hosaziana fa tsy hoe fety akory io dia hajanona fotsiny amin’izao ka avela hanao izay tiany hatao ny tsirairay”, hoy hatrany ity manamboninahitra eo anivon’ny polisim-pirenena ity.